Indlala yegilo - uhlaka okuveza izinto asebenzayo yemvelo --hormone triiodothyronine kanti thyroxine, okuyinto banesibopho umzimba, inhliziyo, isisu kanye nezinye izitho. Thyroid iziyaluyalu angaqoqwa izifo ukuphazamisa umsebenzi walo, nalezo ezihambisana nezinguquko oyiyo. Inkinga yegilo, ehambisana ne-ukwephulwa yokulandelana kwayo ngokohlu, empilweni ziningi kaningi. Asizame ukukhuluma ngazo.
Esikhathini indlala yegilo ngezikhathi kuphakama ezithile ukwakheka - ISIZINDA aqukethe ngaphakathi capsule. Isizathu nokuhlanzeka kwangaphandle nokuziphatha kwabo kungaba ezahlukene, kusukela iodine ukuntula, nezakhi zofuzo, amaza omsakazo, njll Nakuba ubudala ngaleso lwabantu eziba yilo bayanda, basuke kubhekwe kungavamile ukuba ingozi, zisaba yingozi empilweni isiguli.
Ngezinye izikhathi umuntu eba simila yegilo - ekwakhekeni, okuyinto, ngokungafani kuya inhlangano ngaphakathi isikhoxe esigcwele uketshezi futhi kungaba azalwa nako. Njengomthetho, ematfuba ukuthi izingxenye kuyoba nginesimila, 5%.
Okwesikhathi esithile, lezi izimila akazange atente kutsi atiwe, kanjalo isiguli ngisho ukuthi kunomuntu okuthiwa yabo. Ngokuvamile umuntu athole ukuthi siqhamuka simila we indlala yegilo, kodwa uma abavusa noma iqhubeka. Phakathi nale nkathi, ngezinye izikhathi isiguli kungase kwandise izinga lokushisa kanye ukubunjwa ohlangene kukhona obonakalayo futhi apotopotozwe ngaphansi kwesikhumba kalula. Lapho ubukhulu isimila ifinyelela lubonakale ngokubona okubonakala ngeso lenyama, futhi ngokoqobo mayelana 3 amasentimitha, kukhona isidingo sokwelashwa kokulashwa okusheshayo.
Uma udokotela esola ukuthi isiguli nginesimila we indlala yegilo, izimpawu lesi sifo ngokuvamile kakhulu lokhu okulandelayo: ukwethuka, ukuncipha emzibeni, isandla Isakhiwo sazamazama, astringency emphinjeni, umuzwa njalo "yinhlama" emphinjeni, ukugwinya nokuphefumula kanzima, hoarseness, umphimbo obuhlungu, isimila ku indlala yegilo.
Kuwufanele bathi lezi izimila, kuyilapho ekufezeni umxhwele ngokwanele usayizi isimila, sebeqala acindezele imithambo yegazi. Ngenxa yalokho, izinga lokushisa ongama, intamo ubuhlungu, elikhanyayo zamanzi. Simila we indlala yegilo, okuyinto ukwelashwa kufanele ziqale ngokushesha ngemva isiqinisekiso uphethwe kungaba isikhashana ukuze ujike ibe neoplasm ebulalayo.
Hlobo luni ukwelashwa ungenelwe yini kulumkhuhlane?
Okokuqala, kudingeka wenze enemininingwane kakhulu ultrasound lonke yegilo, ukucacisa ubukhulu kanye nemvelo yesimila. Uma nginesimila akuyona abavusa noma iqhubeka, bese wenza wokubhoboza yesibili futhi uqiniseke ukuthi kungavamile ukuba ingozi, kungenzeka baphendukele ukuhlinzwa, futhi ukuze baphathwe izindlela olandelanayo - izidakamizwa equkethe i-iodine noma yegilo hormone. Esimeni iyiphi ukuvuvukala fibrosis kulezi izidakamizwa nemithi elwa namagciwane wanezela.
Indlala yegilo ngokuvamile yakhiwa iyizingxenye ezimbili futhi lesi siqephu bazihlanganisa nabo. Ngezinye izikhathi udinga ukususa nesinye sezabelo. Ngokuvamile, ngemva kokuhlinzwa esinjalo, wendlala akwephuli umsebenzi.
Ngokwezibalo, isimila eladabuka indlala yegilo, uyalulama% 80 kuphela eziguli. Onalesi sifo okubi kakhulu lesi sifo - lena ukuhluma kwezinhlobo novobrazovaniya abulalayo kwezitho zomzimba eduze (Ukudlulela) .Poetomu ezidingekayo kanye ngonyaka, zihlolwe at Ochwepheshe ezihlukahlukene, kuhlanganise i-endocrinology. Phela, nasi isixwayiso -. Kusho ... Kulokhu, singasho into eyodwa kuphela - nempilo enhle. Kungcono kakhulu ukuvimbela isifo kuka ahlupheke ekwelapheni. Futhi khumbula: Usizo - ngomnotho enamandla kakhulu emimoya indoda, nokuthi akunakuthengwa ngoba iyiphi ingcebo.
"Movil": lokho oyikho nalokho isetshenziswa